profile Company - Kac (Tianjin) Steel Sales Co., Ltd
Kici (TIANJIN) Hantida qalaad bir CO., LTD
Dhigyo Company: badeecada BEST WAA LAGA bir kici
Company Qualification: dhaqmayso Shirkada in mabda 'ah "Tayada waa mudnaanta, maamulka waa muhiim ah". Shirkadda Our ayaa u qalma by ISO9001: 2008, shahaado API, shahaado EU, shahaado CE. Shiinaha shahaadada bulshada dirka nidaamka shahaadada maareynta tayo leh, Shiinaha warshad bulshada soocidda idman shahaadada.
Service Company: Rise ku qalabeysan yahay dhowr khadadka wax soo saarka sare ee caalamiga ah iyo qalab gaar ah iyo biibiilaha steel anti-daxalka, taas oo awood u sameeyo noocyo kala duwan oo tuubooyin bir injineernimada anti-daxalka sida hal iyo double isuga epoxy addoonsi (FBE) daahan budo. Polyetylen Double (2PE) iyo daahan 3PE, polypropylene double (2PP) daahan, 3PP daahan dibadda ah, iyo blaastiigga gudaha iyo kuwa dibadda. Intaa waxaa dheer, shirkadda sidoo kale jubbadda tuubooyin bir la rinjiga anti-daxalka ay ka mid yihiin IPN8710 daahan aan sun on derbiga tuubooyin bir, epoxy dhuxusha daahan daamurka, daahan cusbi epoxy, iyo xuubka hoobiye cement kartaan.
Habeynta macaamiisha hore iyo qaadashada tayada ay nolosha. Shirkadda ayaa ka shaqeeya injineerada sare leh waayo-aragnimo wax soo saarka iyo caddaymaha la aasaasay of pre-sale, in-sale iyo adeegyada-iib aheyn ka dib. Waxa fuliya gacanta ku ah guud ahaan tayada nidaamka oo dhan si ay u sameeyaan alaabta iyo adeegyadayada more lagu kalsoonaan karo, hirgalinaayo iskaashi muddo dheer oo xidhiidh labada dhinacba anfaca la macaamiisha.